Three udade oluvelele bazalelwa e-Italy, edolobheni elincane Traversekolo, elise Awukude Parma elimangalisayo. Umama Zoe kanye Giovanna Micol wafundisa amantombazane izinto eziyisisekelo lokuthunga ekuqaleni kuka ebuntwaneni, kodwa udumo beza kuye kuphela ngemva kwalokho wathuthela eRoma. Fontana nodade, ogama biography ugcwele nengangibajwayele nabantu abadumile ubudala bakhe, kwakungafanele ocebile, futhi izingubo ezenziwe kubo benza ekuqaleni ethandwa. Lena indaba umsebenzi onzima futhi amandla okungavamile.
Fontana - nodade imfashini
Ngo-1907, umama namantombazane ', Amabile Fontana, kuvula esitolo sakhe elincane Traversekolo. Ibhizinisi muhle kakhulu, kodwa ikakhulukazi ziphoqa izingubo akasebenzisi. Lokho konke kwashintsha lapho phakathi nawo-1930, udade osemusha futhi ohahela isikhundla wathuthela omkhulu eRoma ezinomsindo. Umdala Zoe, owahamba ekhaya lakhe ngemva komshado, waqale wahlala Milan futhi kamuva e-Paris. ERoma, wonke umndeni ibuyiselwa Fontana. Dadewethu, biography oqala ukuba ikhule ibe i amaqiniso ngendathane futhi ujwayelene nabantu ezintsha, ngo-1943, wavula ibhizinisi lakhe siqu, ngaphandle iqhaza kamama.
Lodumo iza kuye ekuqaleni '50s, lapho superstar wesikhathi Linda Christian amabhuku ingubo yomshado. Izingubo kwaba esiphakeme abezindaba ukuze fashion house 'Izelamani Fontana "ngokoqobo lenyukele ku Hollywood Olympus. Ekuqaleni kuka-1951, izintokazi-abaklami iqhaza ku show yakhe yokuqala, isingathwe ngu- edumile Giovanni Battista Giorgini, e Florence enhle. Engumthengisi Micol ngonyaka olulodwa ahamba Hollywood, lapho uhlela okuhle fashion show. Ngemva lesi sethulo, ekhaya imodeli iyaduma kakhulu bohemian imvelo American, futhi umhlaba wazi igama elisha - odade Fontana. Biography lezi abanamakhono amantombazane isitshela indaba amakhasimende ezidumile abavamile. Ngokwesibonelo, enhle Ava Gardner wathenga ingqikithi ezingaphezu kuka-150 izingubo ukuqopha kanye ikhabethe siqu. Ngaleso sikhathi, odade Model House begqoke abadlali zenziwe futhi abafazi nenhle osopolitiki ezifana Margaret Truman, Grays uKelli futhi Zhaklin Kennedi.
ukuze ehlonishwayo kwaba ukudala ifomu sezikhonzi kwendiza iqembu aeroperevozok ngamazwe Alitalia. Ngo-1960, inikeza US emakethe eside elindelwe umugqa umbala-a-udibi, olwasungulwa Fontana nodade mathupha. Biography omkhaya isitshela indaba umsebenzi ehlelekile nokubambisana elinothile okwakuzoba wonke amalungu alo. Ngokwesibonelo, gay futhi ibhizinisi Micol kwaba sendleleni njalo befuna izindwangu ezintsha futhi ugqozi. Zoe ezinikele zomphakathi ubudlelwane futhi ubeke uphawu. Giovanna akuvamile ukuba kukhishwe kwesokunxele Italy, wakhetha ukuhamba nokuqapha njalo zonke izigaba ukukhiqizwa ingubo.
Fashion House "Fontana Sisters 'namuhla
Ngo-1992, ilebula futhi inkampani uqobo ngabe athengiswe kusukela ezimbili abasunguli ezintathu yayifile Micol kakade ukhathele umsebenzi. Ngo-1994, odade Fontana biography okuyinto njalo ubulokhu uhlangene eduze zihlanganiswa, isasebenza, luvula indlela izitayela ezintsha nemisinga. Micol idale Ikota ukusiza abaklami zabasha emhlabeni wonke. 8 Novemba 2013 kuye lokugcina odade ziyaphawuleka, kumelwe zigcwaliseke eyikhulu, 70 zazo wanikezela zobuciko izingubo.
Lezi zicathulo akuzona nje ezimbi, kubuye kube ingozi empilweni!
Abalingiswa "The Master noMargarita". The main izinhlamvu Romana Bulgakova